Ingabe ngidinga SKS carbine Tuning? SKS (SCS): silungisa ngezandla zakhe
SKS (SCS) lusebenta isibonelo esikufanele elula ukusebenzisa, onokwethenjelwa futhi ngesikhathi esifanayo ezishibhile izikhali ngokwanele. Kwenzeka isimanga, lesi isampula ngobuningi lutholwa abalandeli emazweni asentshonalanga, ikakhulukazi e-United States. Kukulo muzi lapho okokuqala phelelisa SKS carbine. silungisa imodeli base ikuvumela ukuletha izikhali ukuze eduze ukuphelela.
Izindleko carbine Simonov isampula ifektri kuyinto emakethe yasekhaya ngokulandelana 150-200. e. Inani iyahlukahluka kuye ngokuthi ngonyaka futhi isimo lapho isikhali. Lokhu izindleko ivumela cishe wonke fan of izikhali etholakala iqoqo siqu SKS carbine. Silungisa yena, kuba i solution enhle kakhulu ukuba kulandwe amaphisi abahlela usebenze isibhamu ngokuvumelana nenjongo owawudalelwe.
Okumbi carbine base inhlangano
Esikhathini carbine ejwayelekile Simonov kuyinto ngempela esingesihle ukusebenzisa isikhali nge isiqeshana ze-non-esikhiphekayo. Umklamo esetshenziswa isitokwe sokhuni, isibhamu isango futhi insabule ejwayelekile. Konke lokhu kudala hhayi kuphela ngempela alithandeki, kodwa futhi kwenza kube ukusetshenziswa okunethezekile isibhamu.
Nakuba izinga zangaphandle ukucutshungulwa ezinengilazi zivuliwe ezingeni lelisetulu, carbine Simonov esadinga ngcono. Ikakhulukazi, ukulungiswa isikhundla kudinga Butt okungukuthi cishe emgqeni isiqu. Lesi sici nomthelela ongemuhle imizamo ekulinganiseni emgqonyeni ngesikhathi kokudubula.
Njengoba for umnikazi zangaphambi icala: ngokufaka cartridges umamukeli zivame bagibele, futhi isango ukubambezeleka eziphathekayo kubangela abasebenzisi omubi ukuhlola SCS. Tuning Onqobayo lezi yokuntula ngezinga elithile.
Okokuqala, ekushintsheni embhedeni, lapho isikhali ezifana SKS carbine, Tuning. Photo Ushintshe mikhumbi ibonisa ngokucacile ngcono izikhali Ergonomics ngenxa lesi sinqumo. Iqiniso ukuthi ingebe ekuqaleni lakhiwa izidingo sesosha isilinganiso leminyaka elidlule. Ngamanye amazwi - ukubala senziwe ukuphakama 165 cm oda yomsebenzisi kusobala ngempela ukuthi yesimanje indoda Butt base carbine sampuli ngokuvamile lifushane kakhulu .. Ngakho-ke, ukudubula izikhali ezinjalo kubantu kabani ukukhula idlula 170 cm, ungakhululekile kakhulu.
Ukuphothula SKS, kwanele ukusungula embhedeni kusuka nomkhiqizi elihle. Ukuze ukhansele isinqumo ukuqalisa le umgomo singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela embhedeni we brand "Tarso", okuyinto ahlotshiswe isitayela American M16 isibhamu. inketho Decent - kokufaka hardware ATI inkampani, okuzokwenza ukukhipha SKS sniper sokuzingela ngesitayela.
SKS umphelelisi ecacisiwe lento kwasekuqaleni, ukuze anikeze umkhiqizo a look zanamuhla futhi unomuzwa wokuthi kuyafana, ngokuvumelana design, nge lwasekhaya-AK-74. Ngaphezu i ukubukeka ekhangayo, lesi sisombululo ivumela cishe balahle umthelela. Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe base inhlangano imishini carbine nomlomo ukubopha-compensator kungenzeka ngokubulawa kokudubula a insabule zezikhali.
Ububi eyinhloko insabule lithi wanqunywa ukunciphisa isisindo nomlomo we sokuzingela, futhi - ngenxa - baphonsa phezu phambi sikhali ngesikhathi kokudubula. Ngakho-ke, njengoba elinye ithuba kokufaka DTC abanye abasebenzisi ziye zanquma ukuba bahlanganise umgqomo 25, amalutshwana izinsimbi ukuthi kuvala isikhala ethile ebekiwe.
Ithuthukisa SCS - Tune base isampula - kusikisela ukuthi kungenzeka ukufaka collimator noma umbono we-optical. Kute kwetfulwe imibono umnikazi ukulungisa nokuzwa ukukhwezwa nge shift ngakwesobunxele. Nokho, le ndlela practice akuyona kakhulu, ukudubula kusebenziseka kalula ehola kusukela ehlombe langakwesokudla.
Esinye isixazululo - ukufakwa zokubopha kuya umamukeli mobile. Umqondo uwukuthi esifanelekela ukuba asisebenzise collimator emehlweni. Nokho, uma wena ufake yokukhanya kufanele ukhohlwe mayelana nokuthuthukisa ukunemba, kusukela phakathi ebhokisini umlilo kuzodala vibration ezengeziwe.
Ngokuvamile, ukusebenza izinyathelo ezingenhla Kuthi eziyinkinga ngenxa ejection port up. Ubunzima ingase futhi ziphakame uma usebenzisa umnikazi original efakwe kule engxenyeni engenhla igobolondo isibhamu.
Uma kudingeka, uhlelo optical emehlweni esitolo esikhundleni izenzo igunya abasebenzisi ukuhlela ukusizakala SKS carbine. Tuning kulokhu zingenziwa usebenzisa esikhiphekayo (detachable) izitolo. Kuyinto ngokwanele ukuba ahlukanisa futhi asuse isitsha lwendabuko cartridges, bese ayifake kokuvula amasethi detachable Western-isitayela.
Ukukhiqiza ukusebenza ngenhla Kunconywa ne yesivalo wafaka ukubambezeleka. Esikhathini isikhundla avaliwe ibhawudo obandakanya esitolo esihlathini. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukuhlukanisa. Ukuxazulula lenkinga, udinga agawule yokucina ku projection aphansi.
Liqiniseke kangakanani indlela yokushintsha SKS carbine? Silungisa plan onjalo imvelo yasekhaya nzima, ngoba umthetho uyenqaba ukuba iyiphi manipulation yokushutha, futhi ikakhulukazi ukusetshenziswa sokuya empini izikhali ezitolo umthamo ngaphezu 10 imizuliswano. Ngakho-ke, ukukhetha okuhle kulesi simo ukhonza ufushanisiwe ukufakwa esitolo nomthamo amayunithi 5, evumela ukuba aphe ibhokisi ukuma ikhange nakakhulu bushelelezi futhi kuvula kungenzeka ukusebenzisa yokukhanya sextant.
Izinzuzo intuthuko SKS carbine kufanele sifake hlangana okulandelako:
ukulungiswa bahle ngokwengeziwe ukubukeka imvume;
kungenzeka singesifanele futhi inhlangano izikhali kuye ngezidingo ngazinye;
ekuqedeni izikhala isizinda nesakhiwo;
ikhono ukufaka sextant yokukhanya;
ekuthuthukiseni ukuthembeka sokuzingela kulesi sigameko.
Ngokuqondene kahle. Ngeshwa, izindleko izingxenye ukusebenza Tuning ngokuvamile idlula intengo isikhali. Futhi eyinkimbinkimbi izingxenye kufaneleka akusiyo njalo kungenzeka ukuba uqaphele ngokugcwele imisebenzi ngabanye.
Umthetho kaZwelonke eziningi izithiyo ukuguqulwa izikhali ezinjalo. Nakuba uma ufuna njalo ungathola ukuthola izaba e imithetho okulawula ukusebenza khulula imodeli ngcono.
Indlela ekhiphela up isondo ibhayisikili? Amacebo eziwusizo
Tactical Knife - SWAT steel uzipho
Toy noma isikhali esiyingozi? Ukuzingela Slingshot
Modern ibhayisikili amaphampu: bayini?
Ladoga Canal izolo nanamuhla
Ukuzivocavoca ngaphakathi kwethanga: inqubo elula, umphumela omangalisayo:
Yini tattoo "Diamond"?
Usuku olugujwa minyaka yonke ngokufa: kanjani ukukhumbula indoda?
Imvubelo pancake iresiphi
Ukuba izindawo silume abomvu emzimbeni? Sifuna izizathu
Golovin Yangasekhaya: yesimanjemanje prehistory wayo othakazelisayo